Mediam-bahoaka · Novambra, 2014 · Global Voices teny Malagasy
Mediam-bahoaka · Novambra, 2014
Janoary 2022 44 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Mediam-bahoaka tamin'ny Novambra, 2014
Lasa izay ny enimbolana nandrombahan'ny tafika ny fahefana sy nametrahana ny lalàna amin'ny tany miady [miaramila] ao Thailandy. Mandritra izany fotoana izany, mampiasa karazam-pihetsi-panoherana ny jadona miaramila ny olom-pirenena Thailandey.
Herin'ny Masoandro Isan-Tokantrano Mamarana ny ‘Fanavakavahana Ara-Kerinaratra’ ao Bangladesh
Azia Atsimo 30 Novambra 2014
Tsy mba manana herinjiro ny 45%-n'ny ao Bangladesh—izay monina any ambanivohitra ny ankamaroany. Nampiova izany fitongilanan'ny mizana izany ny Tetikasa Masoandro Isam-Baravarana.
vatsiana 30 Novambra 2014
Amerika Latina 30 Novambra 2014
Niantso ny filoha Obama ny gazety New York Times mba hanova ny politika ivelan'ny firenena mikasika ny mpifanolo-bodirindrina aminy ao Karaiba, anisan'izany ny fanafoanana ny fahirano sy ny famerenana indray ny fifandraisana ara-diplaomatika.
Renim-pianakaviana Voalaza Fa Namono Miaramila Talibana10 Nanjary Mahery Fon'ny Firenena
Azia Afovoany sy Kaokazy 30 Novambra 2014
Nitifitra ireo miaramila Talibana ho valifaty tamin'ny nahafatesan'ny zanany lahy ny vehivavy iray ao amin'ny faritr'i Farah, ao Afganistana.
Tsy Mety Mahita Ronono Na Entana Fototra Hafa Any Venezoelà Noho Ny Tsy fahampian-tsakafo? Afaka Manampy Anao Ity Rindrambaiko Ity
Venezoela 29 Novambra 2014
Ny Abastéceme dia mamantatra ny toerana misy ireo entana toy ny ronono, lafarinina ary mofo any Venezuolà, toerana izay sarotra ahitàna ireo entana fototra indraindray.
Nepal : Firy Ny Biby Ho Faty Amin'ny Fetiben'ny Gadhimai Amin'ity Taona Ity ?
Azia Atsimo 29 Novambra 2014
Hampiantrano mpivahiny an'hetsiny ny fetiben'ny Gadhimai any Nepal ary mampitebiteby ireo mpiaro ny zo ao an-toerana sy any ivelany ny anjara ratsy mampihoronkoditr'ireo biby antsasaka tapitrisa.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 29 Novambra 2014
Tsy nisambotra ireo mpandefa ireo lahatsary, sahala amin'ireo miantso fanohanana ny ISIS sy manentana ny herisetra eo amin'ny sekta, ilay sampana misahana ny heloka atao ety anaty Aterineto, tahaka ny fanaony misambotra ireo mpitoraka bilaogy sy ireo mpikatroka mitaky ny zon'olombelona